ရန်ကုန်လိုင်စင် ကို YVQC လက်မှတ်စနစ်နဲ့အကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုပေးသွားမည် – AutoMyanmar
We ❤️ New Cars!
New Car News in Burmese
Auto News (234)
New Models (54)
ရန်ကုန်လိုင်စင် ကို YVQC လက်မှတ်စနစ်နဲ့အကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုပေးသွားမည်
Date: March 5, 2018 0
ရန်ကုန်ကားတင်သွင်းခွင့်လက်မှတ် YVQC (Yangon Vehicle Quota Certificate) စနစ်နဲ့ရန်ကုန်လိုင်စင်ကိုအကန့်အသတ်မရှိ ခွင့်ပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ရန်ကုန်လိုင်စင်လုပ်ဆောင်ရာမှာပါဝင်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီးဆီက ကြားသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်နှစ်တွေကရန်ကုန်လိုင်စင်တင်သွင်းခွင့်လက်မှတ်ကို တင်သွင်းထားတဲ့ကားအစီးရေအတွက်ရဲ့ အများဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရောင်းချပေးခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်မကြာခင်မှာ YVQC လက်မှတ်စနစ်နဲ့ဆိုရင် အကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ရန်​ကုန်​လိုင်​စင် လုပ်​​ဆောင်​ရာတွင်​ ပါဝင်​​တဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ဉီးကလည်းအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“အရင်​က တစ်​နှစ်​တင်​သွင်​းထားတဲ့ကားအစီး​ရေ ကို အကြမ်​းမျဉ်​း ၅ ရာခိုင်​နှုန်​းက​နေ ၁၀ ရာခိုင်​နှုန်​း ​လောက်​​ပေးမယ်​လို့ သတ်​မှတ်​ထားတာ။ လက်မှတ်​ဝယ်​မယ်​ဆိုရင်​ အ​ရေအတွက်​မသတ်​မှတ်​ဘဲ ခွင်​့ပြု​ပေးဖို့​ဆွေး​နွေးထားတဲ့ အ​ခြေအ​နေရှိ​တယ်​။ ​ဧပြီလထဲမှာ ရန်​ကုန်​လိုင်​စင် ခွင်​့ပြုဖို့ လုပ်​​နေပါတယ်​။ “
ဆွေးနွေးမှုသာအောင်မြင်သွားရင် ကားအသစ်တွေအတွက် ရန်ကုန်လိုင်စင် YVQC လက်မှတ်ကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နယ်လိုင်စင်ရပြီးကားတွေအနေနဲ့ YVQC လက်မှတ်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ YVQC လက်မှတ်ကို အင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်သတ်မှတ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလကတော့ အနှစ် ၂၀ ပါ။
local, Yangon license, YVQC
မကြာခင် YBS Mini bus တွေနေရာမှာ စီးတီးဘတ်စ်ယာဉ်တွေနဲ့အစားထိုးတော့မည် January 9, 2019
BMW ရဲ့ Brand chief ဟောင်းဖြစ်သူကိုခေါ်ယူဖို့ကြံစည်နေတဲ့ Audi January 7, 2019
“Top Safety Pick” ဆိုတဲ့ rating ရရှိခဲ့တဲ့ Mitsubishi Outlander December 21, 2018
ကိုယ်ထည်ထိခိုက်မှုအတွက်အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုမှာ ရဲမှုပါပြီးစီးရမည်ဟုဆို December 19, 2018
နိုဝင်ဘာလအထိစစ်တမ်းအရ ၂၀၁၈ အတွင်းမှာ လိုင်စင်မဲ့ကားအစီးအရေ ၁၀၀ ကျော်ဖမ်းဆီးပြီးပြီဟုဆို December 12, 2018
Acura Automotive World Awards Bentley BMW Chevrolet DongFeng Electric Vehicle Ford Fuel policy GAC Motor Myanmar giveaway Grab Honda Hyundai Infiniti Jaguar Kia Lamborghini Lexus license local Marvel Mitsubishi Month of Sales Motor Show and Event New Technology Nissan Peugeot Photo Collections Ram Road Show Rules rumors Suzuki tender Tips and Tricks Toyota Volvo Yangon license YBS Year of sales YPS Yutong YVQC
© 2018 Digital Laboratory Myanmar . All Rights Reserved.